दाँत माझ्दा यस्ता गल्ति जुन कसैले वास्ता गरेका हुदैनन् र अन्त्यमा जिब्रोमा यस्ता असर पर्ने र दाँत समेत झर्ने समस्या आउन सक्छ।बेलैमा जान्नुहोस यस्ता गल्ति,नत्र ढिला होला – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/दाँत माझ्दा यस्ता गल्ति जुन कसैले वास्ता गरेका हुदैनन् र अन्त्यमा जिब्रोमा यस्ता असर पर्ने र दाँत समेत झर्ने समस्या आउन सक्छ।बेलैमा जान्नुहोस यस्ता गल्ति,नत्र ढिला होला
कोलगेट मञ्जनमा ‘त्रिक्लोसा’ नामक स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिने रसायन भेटिएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।कोलगेटमा क्यान्सर विकासमा सहयोग गर्ने ‘त्रिक्लोसा’ भेटिएको टक्सीकोलोजी जर्नलले जनाएको हो । त्रिक्लोसाको उच्च प्रयोगले क्यान्सरको कोष विकास गर्ने अध्ययनले दाबी गरेको छ ।यस्तै यो रसायनले शरीरको महत्वपूर्ण अंगमा नोक्सानी गर्छ ।स्वास्थ्यको लागि त्रिक्लोसा हानिकारक भएको सन् २००८ मै पुष्टि भए पनि कोलगेटले मानिसको स्वास्थ्यमा कुनै असर नगर्ने भन्दै प्रयोग गरिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्रिक्लोसा प्रयोग क्यानाडामा प्रतिबन्ध लगाइए पनि अरु देशमा वास्ता गरिएको छैन ।
दाँत कसरी माझ्ने? धेरैपटक ब्रस गरे के हुन्छ?फेरिँदो जीवनशैलीले मानिसको स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रभाव पारिरहेको छ। यसमा मुख स्वास्थ्य पनि पर्छ। चिकित्सकहरुले दिनमा दुईपल्ट दाँत माझ्न सुझाव दिन्छन्।तर सधैँ यो संभव हुँदैन। पढाईका लागि बिहान कलेज निस्कने र दिउँसो काममा जाने मानिसहरुको सन्दर्भमा खाना पछि ब्रस गर्न संभव हुँदैन। यस्तो दाँतलाई के के असर पर्छ भन्ने बोरमा २५ वर्षदेखि दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत डा. सुशील कोइरालाले देशसञ्चारलाई बताएका छन्।
खाना खाएपछि दाँत माझ्न बिर्सियो भने के हुन्छ ?खाना खाएपछि जुठो भाँडा छोडेको जस्तो हो। छोडेको जुठो भाँडामा जे हुन्छ हाम्रो मुखमा पनि त्यही हुन्छ। जसरी खाना भाँडामा रहँदा लेउ लाग्छ, कुहिन्छ, खाना खाएपछि दाँत नमाझ्दा खानेकुरा मुखमा कुहिन्छ।कुहिएपछि प्रशस्त ब्याक्टेरिया बन्छन्। त्यो किटाणुले अम्लिए पदार्थ निकाल्छ । त्यो पदार्थले दाँतमा आक्रमण गर्छ र दाँतमा किरा लाग्ने, गिजाको रोग ल्याउने गर्छ। भात खाए भाँडा माझ्न बिर्से भनेको जस्तो खाना खानु र दाँत माझ्नुलाई सँगै लैजान आवश्यक छ।
बिहान बाहिर खाना खाने र ब्रस गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा के गर्ने ?यो आचारणमा भर पर्ने कुरा हो। राम्रोसँग स्याहार सुसार गरेनौ भने, स्याहार सम्भार गरेनौ भने पाँचन प्रणालीको पहिलो समस्या मुखबाट सुरु हुन्छ। दाँतमा किराले आक्रमण गर्छ। दाँतमा दुख्ने समस्या भएपछि मात्र डेन्टिसको सम्पर्कमा बिरामी आउने गर्छन् तर धेरैजसोलाई दाँत किराले प्वाल पारेको पनि थाहा हुँदैन। गाउँमा लाटो किरा लागेको भन्छन्, किराले दाँत मकिदै गयो तर उसलाई थाहा नै हुँदैन। नसुन्निदासम्म पनि बिरामी चिकित्सकको सम्पर्कमा आउँदैनन्।
अर्को भनेको बिरामीको सास गन्हाउने समस्या हो। त्यसपछि गिजा सुन्निने, गिँजा थिच्दा तरल पदार्थ निस्कने हुन्छ। यसलाई दन्तहर्ष अथवा पाइरिया हुन्छ। यहाँ दाँतलाई समाएर बसेको गिँजा कमजोर भएपछि दाँतका जरा कमजोर हुन थाल्छन्, झर्न थाल्छन्। यतिबेला अस्पताल गएपछि चिकित्सकले ‘तपाईको दाँत अब जोगाउन सकिन्न’ भन्छन् ।
मुख स्वास्थ्यको कुरा गर्दा ब्रग गर्ने बानीको बारेमा मात्र कुरा हुन्छ नि ?सबैभन्दा ठूलो त ब्रस नै हो। सफा रहनेबारेको सँस्कृति वैद्धिक सँस्कृति र आयुर्वेदबाट सुरु भएको हो। कुल्ला गर्नु, दतिहुनले दाँत माझ्ने, तेल र नुनले दाँत माझ्ने विधि पश्चिमी समाजले हाम्रो सिको गरेको हो। खानामा धेरै किसिमको परिवर्तन आएकोले यो समस्या पहिला धेरै पश्चिमी देशमा थियो। उनीहरुले ब्रस बनाए। तर सफा गर्नु सबैभन्दा ठूलो हो।दाँत शरीरको एउटा यन्त्र हो। शरीरलाई आवश्यक खानेकुरालाई एक प्रक्रियामा ढालेर पाचनप्रणालीमा पठाउँछ। यही यन्त्रमा खानेकुरा अड्कियो भने यन्त्रमा समस्या आउँछ।
विश्वकै मानिस च कित हुने यो बिबाहको ख बर !
नेपालमै यस्तो अचम्मको परम्परा : जहाँ विवाहपछि सबै दाजुभाईसँग पालैपालो रात बिताउनु पर्ने